In la dhiso xiriir waa u baahan yahay kalsooni, taasina waa mid aad u xoogan oo midba midka ka mid ah labada dhinacba ay u badan tahay inaysan lahaan doonin. Ku kalsoonow internetka waa mid ka mid ah muhiimada ugu muhiimsan, gaar ahaan haddii xiriirkaasi yahay mid ganacsi; halkaasoo lacag laga helo. Xitaa ka qoto dheer taasi waa xaqiiqda ah Xogta waa dahab cusub, sidaa darteed wax walba oo aan ku sameyno shabakaduhu waxay u baahan yihiin badbaado.
Dhamaadka isticmaalaha, dhammaantood waxay u baahan yihiin inay xaqiijiyaan tani waa ikoon fudud oo lagu muujiyay shabakaddooda. Wixii milkiilayaasha bogagga, waa waxoogaa ka sii adag, balse maaha inay noqoto.
1 Maxay tahay Laydhka Laydhka (turvaliste pistikupesade kiht) (SSL)?
3.5 Dejinta 301 ümbersuunamine
Maxay tahay Laydhka Laydhka (turvaliste pistikupesade kiht) (SSL)?
SSL waa nidaam amaan ah oo hubinaya isticmaalaha in xiriirka ka dhexeeya kombuyuutarkooda iyo goobta ay booqanayaan ay tahay ammaan. Inta lagu jiro isku xirka, macluumaad badan ayaa ka dhaxeeya laba kombuyuutar, oo ay ku jiraan waxa laga yaabo inay noqon karaan xog qarsoodi ah sida lambarrada kaararka deynta, lambarrada aqoonsiga isticmaalaya ama xitaa ere.
Xaaladaha caadiga ah, xogtan waxaa loo diraa qoraal toos ah, taas oo oo micnaheedu yahay in haddii xiriirku ay tahay in the lagu xiro dhinac sadexaad, xogta la xaday. SSL waxay taasi ka hortagtaa tan adoo ogolaanaya krüptimise algoritm loo isticmaalo inta lagu jiro isku xirka labada dhinac.
Calaamadaynta, ama calaamada cagaaran ee calaamaduhu waxay noqotey tilmaame balan qaadaya dadka isticmaala in boggooda ay booqdaan a do ku qaadaan amnigooda si dhab ah.
Muujinta SSL oo saab saabsan daalacayaasha internetka ee kala duwan.
Asal ahaan su’aasha on tahtnud la weydiiyo waa "Ma teadsin, et te ei saanud SSha".
Aqoonsiga tan, bilawga juuli 2018, Google wuxuu ku calaamadeyn doonaa dhammaan bogagga HTTP caadiga ah ee aan aheyn mid aan amaan ahayn. Tani waa muhiim la aqoonsado, maxaa yeelay waxay macnaheedu tahay in goobaha loo aqoonsado inay yihiin kuwo aan amaan ahayn Google ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo ganaax raadinta. Websaydhadu waxay ku faanaan gaadiidka iyo haddii aadan ka muuqan liiska Google, ka dibna ma heli doontid vaha badan marka la eego taraafikada bogga.
Qiimaha laga bilaabo 36,75 dollarit / sanad
Qiimaha laga bilaabo 8,88 dollarit / sanad
Qiimaha laga bilaabo 14,95 dollarit
Qiimaha laga bilaabo 75,15 dollarit / sanad
Qiimaha laga bilaabo 175 dollarit / sanad
Qiimaha laga bilaabo 149 dollarit / sanad
Qiimaha laga bilaabo 59,99 dollarit / sanad
SSL bilaash ah: Aynu krüpteerib
Aan isku dayno waa CA aaminsan oo furan oo bilaash ah in la isticmaalo (). Nasiib daro, waxay kaliya bixisaa shahaadooyinka domain-ama shahaadada DNS oo aan qorsheyneynin in ay kordhiso tan OV ama EV. Tani waxay ka dhigan tahay in shahaadooyinkoodu kaliya on ansixin karaan lahaanshaha iyo ma aha shirkadda heysata. Haddii aad tahay goob ganacsi, taasi waa caqabada ugu weyn.
Aynu Encrypt horay ugu qaabaynay shirkadaha martigeliya qaarkood (tusaale ahaan- SiteGround iyo GreenGeeks). Haddii ja qorsheyneyso inaad raacdo Aan Encrypt Free SSL, waxaa ugu wanaagsan inaad martigeliso keskel ka keskel ah martigaliyayaasha websaydhkan.
Si aad u eegto heerkaaga bilaashka ah Waxaan ku dhajinaynaa shahaadooyinka SSL ee SiteGround, gali cinwaanka> Amniga> SSL / TLS haldur> Sertifikaadid (CRT).
Laga bilaabo Maarso 29, 2018, Aynu Hirgelin SSC SSC waxaa sidoo kale ku jira (bilaash) dhammaan xisaabaadka martigelinta ee SiteGround. Tani waxay noqonaysaa ilaaliye waqti loogu talogalay milkiilayaasha goobta ku jira oo ku shaqeynaya dhowr alamdomeenid (mail.domain.com, billing.domain.com, iwm). Vaha badan ka bar dib-u-eegga boggaaga.
Jaotises „Valikud” leidub guji „SSL / TLS Manager”
Jaotises „Install oo Manage SSL” installige dooro „Maaree Site SSL”
Guji ‘sertifikaadi automaatne täitmine’
* Xusuusin: Haddii aadan isticmaalin cinwaan IP ah oo aad udheeraad ah waa inaad keset ka keset ah ka doorato menüüd IP-ka.
Sildi bogga Websaydhada & Domeenid-ka dooro qaybta aad jeceshahay inaad ku dhejiso shahaadada.
Marka la eego qaybta ‘Laadi üles sertifikaadifailid’, riix ‘Sirvi’ oo dooro shahaadada iyo calaamadaha CA ee loo baahan yahay.
„Turvalisuse” all on waa inay jirtaa liiska hoos-hoosaadka aad u doorato shahaadada.
Haddii aad eegto Internet interneti kaudu ee interneti waxaad arki doontaa inay dhammaantood isticmaalayaan HTTP. Sida iska cad waxay u baahan yihiin in HTMPS xidhiidhada cusbooneysiiyo. Hada dhowr tallaabo waxaan ku tusinaynaa hab aad adigu u sameyso adigoo isticmaalaya farsamo dib u habeyn.
Haddii aad leedahay raba yar oo leh bogag dhowr ah oo aan muddaba qaadan. Si kastaba ha ahaatee haddii aad leedahay boqolaal raba, waxay qaadanaysaa da’da si aad uga fiicnaan laheyd adoo isticmaalaya qalab si aad u baratid tan si aad u badbaadisid wakhti. Haddii goobtaada pole sa socoto xogta, samee raadinta xogta iyo bedelida isticmaalka warqadan bilaashka ah.
Märgistage HTTPS-i abil ja kui teil on olnud shabakadaha dibedda ee kugu xariira waxay kuu tilmaamayaan nooca HTTP. Waxaan samayneynaa dib u jeedin dhowr ah tallaabooyinka, laakiin haddii a jiraan vaha veebisait ah oo dibadda ah oo aad adigu koontarooleyso profile ka dibna waad soo cusbooneysiin kartaa URL si aad u tilmaamto nuqulka HTTPS.
Tusaalooyin wanaagsan oo kuwan ka keset ah waxay noqon doonaan farsamooyinkaaga warbaahinta bulshada iyo liisaska liisaska meesha aad ku leedahay raba raba oo kuxiran xukunkaaga.
Dejinta 301 ümbersuunamine
Iyadoo 301 dib u hagaajineyso waxa aad sameyneyso waxay u sheegeysaa Google in bogga gaar ah si joogto ah loogu guuray cinwaan kale. Xaaladdan waxaad u sheegeysaa Google in wax kasta oo HTTP ah oo kuuuu boggagaaga aa hadda yihiin HTTPS sidaa valmis waxay Google u direysaa bogagga saxda ah.
Inta badan dadka isticmaala Linux Linux martigelintaan waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo faylka .htaccess (eeg code Korea) sida ku xusan talooyinka Apache).
ServerNimi www.example.com ümbersuunamine "/" "https://www.example.com/"
Tani dhab ahaantii waa tallaabo ikhtiyaari ah maxaa yeelay maaha qof kasta oo isticmaala CDN. CDN waxay u tahagan tahay shabakadda nii gudbinta Macluumaadka oo waa juquraafi ahaan loo qaybiyey server oo kaydiya nuqulada faylashaada shabakadaada waxayna u soo bandhigi doonaan martidaada ka pelglik serverkaa juquraafi ahaan u doy si loo hagajiyo.
Sidoo lehtkapsas horumarinta waxqabadka, CDN waxay sidoo lehtkapsas bixin kartaa nabadgelyo wanaagsan sababta oo ah bay’aduhu waxay kormeeraan oo aqoonsadaan taraafikada xun xx waxayna joojiyaan inay gaaraan boggaaga.
Kui te olete jõudnud CDN ooperisse, siis on see kaudne, aga ka siis, kui SSL-kaaga on teie jaoks nidaamka CDN, aga ka CDN oo.
Ku dhowaad dhammaan daraasadaha ku jira isticmaalka baahsan sida Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Iyo Apple Safari waxay ku dhistay bakhaarro loo isticmaalo in the lagu aqoonsado shahaadooyinka SSL-yada la aaminsan yahay.
Si aad u gudubto saabus SSL, qaar ka mid ah milkiilayaasha bogagga waxay abuuraan Shahaadooyin SSL-kooda. Tani waa suurtogal, laakiin ha sameynin wax isbeddel ah tan iyo markii aysan saxeexin CA. Waqti keli ah ee shahaadooyinka is-saxiixa on u badan tahay in la isticmaalo waa goobo imtixaan ama horumarineed. Meelaha ay ku qoran yihiin shahaadooyinka is-saxiixan looma muujin doono inay yihiin ammaan.
4 – Khaladaadka Macmiilka ee segatud
Tani waa dhibaatada qaabaynta. Shahaadooyinka SSL ee shaqeynaya, raba kasta iyo faylka ku yaal boggaaga waa inuu ahaado HTTPS. Tan waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya bogagga, laakiin sidoo kale sawirada iyo dokumantiyada. Haddii bogga kaliya uusan aheyn HTTPS, goobta waxay la kulmi doontaa qalad isku dhafan oo dib ugu noqoshada HTTP.
Si looga hortago dhibaatooyinkan, hubi xiriiradaada loomisel cusbooneysiiyay xidhiidhada HTTPS.
Dhammaadka maalinta, shahaadooyinka SSL waa xaalad guuleysi leh. Haa, waxaa laga yaabaa lagu qasbo ganacsiyada waaweyn sida Google, laakiin waxaa jira runtii aad u yar.
Qiimaha yaryar, waxaad u xaqiijin kartaa macaamiisha ammaanka ee macluumaadka iyo asturnaanta. Macaamiisha dhinaca kale, waxay dib u soo ceshan karaan rumaysiga teknoolajiyada digital-ka ah, oo ah mid si aad ah u cakiran Hackers, Spamers iyo kuwa kale ee loo yaqaan ‘Cybercriminals’.
e-kaubandus waa mid ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee dhaqaalaha dijitalka waxaana uu gacan ka geystey kor u qaadista ganacsiga xudduudaha xuduudaha hadda ka hor. Iyada oo la ilaalinayo xogta ammaan iyo ammaan, mulkiilayaasha boggaga shakhsi ahaaneed ayaa gacan ka geysan kara ammaanka internetka sidoo kale.